HomeWararka CiyaarahaBar-barihii Chelsea ee Manchester United oo Xaqiiqooyinka Cusub laga Dii
November 29, 2021 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska 0
Kooxda Chelsea oo Garoonkeeda ku soo dhaweesay Manchester United kulan ka tirsan Premier League ayaa ku soo dhamaaday barbaro 1-1.
Kukanka oo ahaa mid Hal dhinac ah marka la eego Weerarka Chelsea iyo qaab Difaaca Manchester United ayaa marka Hore u muuqday mid ku dhamaanaya 1-0 oo Kooxda Manchester United ka Caawiyay Sancho lakin Xidiga Jorginho ayaa ku bar-bareeyay Gool rigoore ah.
Xaqiiqooyin Cusub ayaa laga Diiwaangaliyay Kulankan.
Labadii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League ee ay Stamford Bridge ku wajaheen Burnley iyo Manchester United, Chelsea ayaa isku dayday 49 shuut, kaliya 8 darbo ayay la Kulantay, waxaana ay 100 taabteen xerada ganaaxa kooxda ka soo horjeeda, si kastaba ha ahaatee, waxay ku guuldareysteen inay guul gaaraan kulamada isku xigta ee garoonkooda. markii labaad ee uu hogaaminayay Thomas Tuchel.
13 ka mid ah 15 gool ee uu Jorginho ka dhaliyay Premier League ayaa ku yimid rigoorayaal (87%), waana saamiga ugu badan ee ciyaaryahan kasta oo 10+ gool ka dhaliyay taariikhda tartanka.
Goolkii furitaanka ee Jadon Sancho ayaa ahaa goolkiisii ​​labaad ee Manchester United kulamo badan, ka dib goolkii uu bartamihii isbuuca ka dhaliyay Villarreal. Tani waxay timid ka dib 16 kulan oo goolal la’aan ah dhammaan tartamada oo dhan Dortmund (2) iyo Red Devils (14).
Michael Carrick ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Ingiriis ah ee qabta shaqada Manchester United kulan horyaalka ah tan iyo Ron Atkinson dabayaaqadii November 1986 (1-1 vs Coventry).